अर्थमन्त्री खतिवडासहित १९ जना राष्ट्रियसभाबाट विदा हुँदै
अर्थमन्त्री खतिवडासहित १९ जना राष्ट्रियसभाबाट विदा हुँदै अब चयन भएका राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षकै हुनेछ
राम नारायण ठाकुर मंगलबार, फागुन २०, २०७६
काठमाडौं– राष्ट्रियसभा संसद मध्ये २ वर्षे कार्यकाल भएका १९ जनाको पदावधि मंगलबारबाट सकिँदैछ। २०७४ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो। गोलाप्रथा गर्दा २ वर्षे कार्यकाल पाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायत १९ जनाको पदावधि मंगलबारबाट सकिएको हो।
१८ पदका लागि गत माघ ९ गते निर्वाचन भइ नयाँ सदस्यहरु चयन भइसकेका छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका डा. युवराज खतिवडा पछिको रिक्त स्थानका लागि भने कोही चयन भएको छैन्।
नेपालको संविधानअनुसार व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो। राष्ट्रियसभामा ७ प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वा्चित हुने प्रावधान छ। ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गरी ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गर्छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुने र एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल २ वर्षमा सकिन्छ। कार्यकाल सकिएका सदस्य जहाँबाट जसरी चयन भएको थियो सोही विधिबाट पदपूर्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिलो पटक २, ४ र ६ वर्षे कार्यकालका लागि गोलाप्रथा गरिएपनि अब चयन भएका राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षकै हुनेछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २०, २०७६ १३:२५